Wararka Maanta: Axad, Oct 10, 2021-Xukuumada Somaliland oo soo saartay amaro lagaga hortagayo faafista Covid-19
Amar kasoo baxay Guddida ka hortaga Caabuqa Covid19 ee Somaliland, ayaa bulshada lagu amray in ay xidhaan afsaab marka ay joogaan goobaha layskugu yimaado, sida masaajidada, xafiisyada dowlada, suuqyada, xafladaha, shirarka iyo W.L.M.
Sidoo kale, waxay guddidu bulshada fartay in ay kala fogaadaan masaafo dhan 1.5 mitir ugu yaraan, xiliyada ay joogaan goobaha ay bulshadu ku kulanto.
Imaamyada masaajidada ayaa la faray in ay bulshada ku amraan ay afsaab soo qaataan, sijaayad gaar ah qofkasta la yimaado, dadku in ay si teel teel ah u tukadaan oo kala fogaadaan ugu yaraan 1.5 mitir, in la xidho goobaha waysada iyo in salaad kasta lagu soo koobo 25 minit.
Masaajida fulin waaya amarada kor ku xusan waxa loo aqoonsan doona, in ay dhiirigalinayaan faafista caabuqa.
Guddida ayaa bulshada fartay in ay qaataan tallaalka Covid19, waxa si gaara amar loogu bixiyay in dhamaan shaqaalaha caafimaadka, waxbarashada, dowlada iyo ciidamada heerarkooda kala duwan ay qaataan tallaalka.
Ugu danbayn guddida ayaa ku dhawaaqday in aan qofkna loo ogolaan doonin in uu ka qayb galo aaska qof la caddeeyay in uu u dhintay caabuqa, waxay sheegtay in wasaarada caafimaadku masuulka tahay aaska qofka caabuqa u dhinta.
Tirada guud ee dadka maanta caabuqa Covid-19 laga baadhay waa 445 qof, tirada guud ee maanta laga helay waa 55 qof, tirada guud ee maanta caabuqa u dhimatayna waa 7 qof guud ahaan Somaliland.